Ndingaite Sei Ini Kudzima Wrist Kuonekwa Pane Apple Watch? Iyo Kugadzirisa! - Apple Tarisa
iphone 6 nhema uye chena skrini
iphone x inongoerekana yadzima
iphone 5s inobata skrini isiri kushanda mushure mekutsiviwa kwechidzitiro
Unoda bvisa Wrist Detection pane yako Apple Watch , asi hauzive kuti sei. Wrist Detection inochengetedza ruzivo rwako nekukiya yako Apple Watch kana usiri kuishandisa.
Ndakanzwa ndichimanikidzwa kunyora chinyorwa ichi nekuti Apple yakachinja nzira yekudzima Kuonekwa kweWrist paApple Watch pavakaburitsa watchOS 4. Kudzima Wrist Detection ndiyo imwe mhinduro yakajairika kana Apple Watch Notices hadzisi kushanda , saka ini ndanga ndichida kuve nechokwadi kuti iwe une ruzivo rwechizvinozvino.
Maitiro Ekudzima Wrist Kuonekwa
Unogona kudzima Ruoko rweWrist zvakananga paApple Watch kana muApple app pane yako iPhone. Ini ndinokuratidza maitiro ekuzviita nenzira mbiri pazasi.
Pane Yako Apple Tarisa
Vhura iyo Zvirongwa app pane yako Apple Watch.
Tinya Passcode .
Tinya pane chinja padhuze neWrist Detection.
Kana yambiro yekusimbisa ikaonekwa, tapira Dzima .
Mushure mekubaya Dzima , switch yacho ichaiswa kuruboshwe, zvichiratidza kuti Wrist Detection yakadzimwa.
Pane Yako iPhone Mune Iyo Yekutarisa App
Vhura iyo Tarisa app .
Bhura pasi uye wobva wadzvanya pane switch padyo neWrist Detection.
Tinya Dzima kusimbisa chisarudzo chako.
Mushure mekubaya Dzima , iwe uchaona kuti switch iripedyo neWrist Detection yakaiswa kuruboshwe, izvo zvinoratidza kuti yadzimwa.
Chii Chinoitika Kana Ini Ndadzima Wrist Kuonekwa paApple Watch?
Paunodzima Ruoko rweWrist pane yako Apple Watch, zvimwe zvezviitiko zveAction chiitiko zvichave zvisingawanikwe uye yako Apple Watch inomira kukiya otomatiki. Nekuda kweizvi, ini ndinokurudzira kusiya Wrist Detection pane kunze kwekunge uine dambudziko rekugamuchira zviziviso pane yako Apple Watch.
Hapanazve Kuonekwa kweWrist
Iwe wakabudirira kudzima Wrist Detection pane yako Apple Watch! Ndinovimba muchagovana ichi chinyorwa pasocial media kuti mhuri yako neshamwari vazive nezve shanduko iyi muWatchOS 4. Ndatenda nekuverenga uye unzwe wakasununguka kusiya chero mimwe mibvunzo yauinayo nezve yako Apple Watch kana iPhone muchikamu chemashoko pazasi.